ऊर्जामन्त्री पुन र सिचुवान प्रान्तका उपगभर्नरबीचको भेटवार्तामा के भयो ? | suryakhabar.com
Home उर्जा ऊर्जामन्त्री पुन र सिचुवान प्रान्तका उपगभर्नरबीचको भेटवार्तामा के भयो ?
ऊर्जामन्त्री पुन र सिचुवान प्रान्तका उपगभर्नरबीचको भेटवार्तामा के भयो ?
on: ३ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १४:४५ In: उर्जाTags: No Comments
काठमाडौँ । सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुन र नेपाल भ्रमणमा रहेका चीनको सिचुवान प्रान्तका उपगभर्नर पेङ युसिङबीच भेटवार्ता भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा आज भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको थियो ।
भेटमा ऊर्जामन्त्री पुनले नयाँ सरकारको प्राथमिकता विकास र समृद्धि रहेको भन्दै त्यसका लागि नेपालमा चिनियाँ लगानी आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको भन्दै चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह समेत गरे ।
मन्त्री पुनले आगामी दिनमा जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा चीनबाट सहयोग र लगानीको अपेक्षा रहेको बताए ।
भेटमा उपगभर्नर युसिङले चीनमा सिचुवान प्रान्त ऊर्जाको क्षेत्रमा निकै धनी रहेको भन्दै सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रका साथै सडक निर्माणको क्षेत्रमा समेत सहकार्य गर्न तयार रहेको धारणा राखे ।
३ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १४:४५